Man United & Real Madrid oo Kooxda Barcelona ka afduubanaya xiddiga ay muddada daba-joogtay ee Lautaro Martinez %
By Badrudiin Mohamed	 On Jun 8, 2020
. Kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay si dhow isha ugu hayaan horumarka uu sameyanyo xiddiga weerarka ugu ciyaara Naadiga Inter Milan ee Lautaro Martinez, iyadoo ay jirto suurtogalnimada ay uga afduubanauaan lkooxda Barcelona.
Xiddiga reer Argentina ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanayey Inter Milan intii lagu jiray xilli ciyaareedka 2019-20, isagoo dhaliyay 16 gool 31 kulan uu saftay oo ay ku jiraan shan gool uu ku dhaliyay lix kulan oo Champions League ah.
Barca ayaa si joogta ah loola xiriirinayay Weeraryahanka isbuucyadii u danbeeyay, laakiin waxaa la fahansan yahay in kooxda heysata horyaalka Spain inay ku dhibtooneyso inay heshiis la gaarto xiddigan qandaraaskiisa San Siro lagu burburin karo 111 milyan euro oo u dhiganta 99 milyan oo gini.
Sida laga soo xigtay Jariirada Marca ee ka soo baxda dalka Spain, kooxda reer Catalan wali waxaa loo qiimeynayaa inay u dhaqaaqaan laacibka reer South America, iyadoo Man United iyo Madrid ayaa labadaba isha ku haya horumarka xiddigan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Man United ay la kulantay Wakiillada 22-sano jirkaan ‘isbuucyo yar ka hor’ si ay ugala hadlaan heshiis macquul ah xagaaga, Red Devils ayaa weli xiiseynaysa saxiixiisa.
Dhanka kale, Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay isha ku hayaan xaaladda, iyadoo kooxda caasimadda Spain ka dhisan ay raadineyso bedelka mustaqbalka fog ee Weeraryahankeeda Karim Benzema.
Martinez ayaa shabaqa soo taabtay 25 jeer 66 kulan oo uu u saftay Inter Milan tan iyo markii uu kaga soo biiray Naadiga ka dhisan Serie A kooxda Racing Club xagaagii 2018.
Ajaxa Oo Xaqiijisay In Ay Man United Doonayso In Ay Dhamaystirto Saxiixa Van de Beek